Location: musha » Kutumira » Nyika | Dunhu » Singapowo » Vashandi vese vasina kubayiwa zvino varambidzwa kubva kunzvimbo dzebasa muSingapore
Vashandi vasina kubayiwa zvino varambidzwa kubva kunzvimbo dzebasa muSingapore
“Kana kugumiswa basa kuri kukonzerwa nekutadza kwevashandi kuva pabasa kuti vaite basa ravakapihwa, kuregedzwa kwebasa kudai hakuonekwe sekudzingwa basa zvisiri izvo,” yakadaro hurumende.
The Republic yeSingapore.
Kurambidzwa kutsva kunoreva kuti vashandi vazhinji vasina kubatwa basa vasingakwanise kuita basa ravo pamba vanogona kudzingwa basa.
Kurambidzwa kutsva, kwakaunzwa neMugovera sechikamu che Singapowo'Chikamu chechipiri' chirongwa chevashandi, chinorasa gwara rekare raibvumira vashandi kushanda vari vega kana vakapa bvunzo dzisina kunaka dzeCCIDID-2.
Kubva nhasi zvichienda mberi, "vashandi chete vakabaiwa zvizere, vane zvitupa zvekusakwanisa kurapwa kana kuti vakapora kubva kuCCIDID-19 mukati memazuva zana nemakumi masere, vanogona kudzokera kubasa," Singapore's. Ministry of Manpower yakaziviswa.
Bazi rakayambira kuti avo vashandi vasina kubayiwa vasina kuwira mune chero yezvikamu zvisingabvumirwe "havazobvumidzwa kudzokera kubasa" kunyangwe vakapa bvunzo.
Singapowo mabhizinesi akarairwa kuti ape vashandi vasina kubayiwa mabasa anogona kuitwa kubva kumba kana kuvaisa pazororo risina kubhadharwa. Nekudaro, kana kambani ikaona kuti hapana nzira yainokwanisa kugarisa mushandi asina kubayiwa, inogona kuvadzinga pasina chero ramification.
"Kana kugumiswa basa kuchikonzerwa nekutadza kwevashandi kuva pabasa kuti vaite basa ravakapihwa, kugumiswa basa kwakadaro hakungatariswe sekudzingwa zvisiri izvo," hurumende akadaro.
Vashandi vanongobaiwa nhomba vanobvumidzwa kugara munzvimbo yebasa kusvika Ndira 31 kana vakaramba vachipa mhinduro dzisina kunaka dzeCCIDID-19. Mushure mezuva iroro, zvisinei, ivo vachatarisana nezvirambidzo zvakafanana neavo vasina kubayiwa.
Vanhu vasina kubaiwa vakatorambidzwa kubva kumaresitorendi uye nezvitoro zvakawanda mukati Singapowo. Guta-nyika ndiyo imwe yenzvimbo dzakabaiwa zvakanyanya paNyika. Muna Zvita, hurumende yakataura kuti vashandi vangangosvika zviuru makumi mashanu neshanu vanga vasati vatora pfuti yavo yekutanga yeCCIDID-52,000, vachiona kuti "chikamu chidiki" chete pakati pavo chinokodzera kuregererwa mukurapa.
New Norway/EU kuenda kuUS ndege paNorse Atlantic Airways
Ethiopian Airlines neBoeing vanosaina MoU ye777-8 itsva...
Nyowani robotic-inotungamirwa mhinduro yekenza yeprostate ...
New Digital Therapeutics yekubatsira Vanhu vane Cancer...
Hupenyu Hutsva hwakafemerwa mukudzoka kweRoman Travel Show
Mukuda naPutin? Air Serbia, Turkish Airlines...
FDA inobvumidza kuisirwa kutsva kurapa cartilage uye ...
Chirevo Chitsva cheVakuru uye Hutano hwepfungwa Munguva yeCOVID-19
Barbados Forges Yakakosha Strategic Cruise Partnership
IATA ikozvino inotarisira nhamba dzevatyairi vemhepo kuti dzidzoke mu ...
Ndege nyowani kubva kuCalgary neVancouver kuenda kuKelowna...
Kupayona tsvakiridzo yeKunatsiridza Gomarara reMazamu